पाँच बर्ष भित्र तुलसीपुरको सम्बृद्धि : पाण्डे « Tulsipur Khabar
मुलुक यत्ति बेला चुनाबी महोलले केन्द्रित छ । पार्टीका उम्मेदवारहरु अहिले उपमहानगर, वडा–बासीहरुको घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन् । आफ्ना चुनाबी एजेण्डा सहित आफ्नो जित हुने विश्वासका साथ आफुलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उपमहानगरबासी तथा वडाबासीहरुका लागि पनि कुन उम्मेदवार छान्ने अथवा कसलाई भोट दिने ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहिरहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रित रहेर एमाले बाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरका उम्मेद्धार घनश्याम पाण्डेसंग गरीएको कुराकानि ।
चुनावलाई लक्षित गरी कस्ता कस्ता कार्यक्रम गरि रहनु भएको छ ?
अहिले हामीले घरदैलो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौं । साथसाथै चुनाब प्रचार प्रसारका लागि अन्य कार्यक्रमलाई पनि चलिरहेका छौं ।
अहिले हजुरहरु चुनाबी एजेण्डा लिएर घरदैलोमा गईरहदा मतदाताहरु के प्रतिक्रिया दिन्छन् ?
२० बर्ष पछि हुन लागेको स्थानीय चुनाबको उम्मेद्धार बनेर हामी घरदैलोमा गईरहदा मतदातामा आशा पलाएको छ । जनप्रतिनिधि बिहिन स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउने भएपछि उनीहरुमा बिकास, सम्बृद्धिको आशा पलाएको हामीहरुलाई प्रतिक्रिया दिने गर्छन् । मतदातामा एक किसिमको मतदातामा उल्लास छ ।
बि.स. २०५४ मा भएको स्थानीय चुनाबमा पनि हजुर जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ रु त्यतिबेलाको चुनाब प्रचार प्रसार र अहिलेको चुनाब प्रचार प्रसारमा के फरक छ ?
ट्रेनका हिसाबले एकै एकै हो । त्यो समयमा चुनाब प्रचार प्रसारको माध्याम भनेको बैठक, घरदैलो , भेटघाट नै थियो । अहिले पनि त्यस्तै हो । अहिले प्रबिधिको बिकास संगै केही नयाँ शैलीको बिकास भएको छ । एजेण्डाहरु जनतामाझ सजिलै पु¥याउन सामाजिक सञ्चालको प्रयोग हुने गरेको छ । त्यतीबेला सामाजिक सञ्जालको बिकास भएका थिएन् । अर्कौ कुरा म्युजिकका माध्यमबाट पनि ऐजेण्डाहरु जनतामाझ लैजान सहज भएका छ ।
त्यति बेला गीत संगितको माध्यामबाट चुनाब प्रचार गर्ने शैलीको बिकास भएको थिएन् ?
त्यतिबेला, यसरी उफर मार्फत गाउगाउमा गएर चुनाब प्रचार प्रसार गर्ने तथा गीत संगीतको माध्यामबाट एजेण्डाहरु जनतामाझ लैजाने शैलीको बिकास भएको थिएन् । तर प्रचारप्रसारका क्रममा बाध्यबाधन टोली बनाएर घरदैलोमा जाने अनी त्यही टोलीले गीत संगीत गाउने , नाच्ने चलन थियो । अहिले प्रबिधिको बिकास संगै पहिले भन्दा अहिले चुनाब प्रचारप्रसार गर्न सजिलो भएको छ ।
चुनाब प्रचार प्रसार गर्ने शैली पनि खर्चिलो, भड्किलो हुदै गएको र आचारसंहीता नै उल्लंघन हुने गरेका छन्, भन्ने टिप्पनी हुने गर्छन नी रु
हाम्रो पार्टीले आचारसंहीतालाई सम्मान गरेको छ । हामीबाट कठोर ढंगले निर्बाचन आयोगको आचारसंहीता उल्लंघन हुने गरेको छैन् । यो उपमहानगरपालिका भएकोले मतदाता धेरै छन, क्षेत्र ठुलो छ , त्यसैले निर्बाचन परिचालनको क्रममा अलिकति खर्चिला हुनु स्वभाबिकै हो । तर अस्वभाबिक रुपमा ठुलो खर्च हामीले गरेका छैनौं । निर्बाचन आयोगमा उम्मेद्धारीका रुपमा दर्ता भईसकेपछि मात्रै आयोगले तोकेको खर्चको सीमा लागु हुने हो । उम्मेद्धारी दर्ता भईसकेपछि त्यही सिमामा रहेर खर्च हुन्छ । उम्मेद्धारी दर्ता नहुँदाको बखत हुने खर्चलाई निर्बाचन आचारसंहीता संग जोडन् मिल्दैन् । निर्बाचनको पुर्ब तयारीका बेला भएको खर्चको बिषयमा निर्बाचन आयोग पनि बोल्दैन् ।
एमालेको तर्फबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरको रुपमा चुनाबी मैदानमा गईरहदा आफ्नो जीत सुरक्षित भएको ठान्नु हुन्छ रु
निर्बाचन भने पछि स्वभाबि रुपले प्रतिस्पर्धा हुन्छ । मेरो ब्यक्तिगत रुपमा भन्नु पर्दा मैले जीवनमा अहिले सम्म कुनै पनि चुनाबमा हारेको छैन् । अर्को तर्फ एमालेको सरकारले राष्ट्रियता, सम्बृद्धिका निम्ति पु¥याएको योग्दाननै हाम्रो जित्ने बलियो आधार हो । एमालेले जनताका एजेण्डा उठाएकाले पनि एमालेको जनलहर बढि रहेको छ , यसले पनि एमालेले जित्ने सुनिश्चित छ ।
मतदाताहरुले हाम्रालाई भन्दा पनि राम्रालाई भोट दिने प्रतिक्रिया दिदै आएका छन्, अब घण्श्याम पाण्डेलाई नै किन भोट दिनुपर्ने ?
मैले यस अघि पनि साबिक तुलसीपुर नगरपालिकाको उपमेयर भएर ५ बर्ष काम गरे । म संग स्थानीय जनप्रतिनिधि भएर काम गरेको अनुभब छ । २२ बर्षको उमेरमा उपमेयरमा निर्बाचित भईरदा त्यतिबेला स्थानीय स्तरमा सिमित अधिकार थिए । ती समिति अधिकारलाई प्रयोग गरेर म उपमेयर भएको हिसाबले नगरबासीलाई सेवा दिन उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेको थिए । त्यसले यहाँका जनतामा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । मैले उपमेयर भएर काम गरिसकेको आधारमा मेयरमा जानु स्वभाबिक बढुवाको कुरा पनि हो । अर्को तर्फ तुलसीपुरलाई उपमहानगरपालिका बनाउने एमालेको एजेण्डा, नीति थियो, सोही अनुरुप नै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका बनेको छ । अब उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व पनि एमालेले नै गर्नु पर्ने भएकाले एमालेलाई मतदाताले भोट हाल्नु हुनेछ । अर्को तर्फ तुलसीपुरको मेयेरको रुपमा नेकपा एमालेले मलाई अगाडि सार्दै गर्दा म संग तुलसीपुर सम्बृद्ध,सफा, हरियाली , सुसंस्कृत बनाउने स्पस्ट दृष्टिकोण छ । तुलसीपुरबासीले चाहेको सम्बृृद्ध तुलसीपुरको सपनालाई साकार पार्न मैले अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छु र त्यसमा हरेक उपमहानगरबासीको सहभागिता रहने छ । त्यसका लागि एमालेलाई बिजय बनाउन उपमहानगरबासीलाई अनुरोध पनि गर्छु ।
तुलसीपुरलाई सम्बृद्ध बनाउछु भन्नु भयो, ५ बर्ष भित्र सम्भब छ ?
त्यसका लागि हामीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा ५ बर्षे आबधिक योजना बनाउछौ । हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले अघि सारेको चुनाबी घोषणा पत्र राष्ट्रिय, जिल्ला, उपमहानगर र वडास्तरमा प्रतिबद्धता पत्र जारी गरेका छौं । त्यही प्रतिबद्धता पत्रलाई आधार मानेर ५ बर्षे कार्ययोजना बनाउछौ । जसमा हामीले भु–उपयोग नीतिलाई महत्वपुर्ण आधार बनाएका छौं । हामीले औधोगिक , पर्यटकीय, शैक्षिक, खेलकुद ,रंगशाला, बजार क्षेत्रको लागी छुट्टाछुट्टै उपयुक्त स्थान छुट्याउने छौं । त्यस्तै नगरपालिकाका वडा कार्यलय , कृषिको ब्यबसायीक उत्पादनको पकेट क्षेत्र , फोहरमैलालगायतका कुरालाई मध्यनजर गरी एकीकृत बिकास योजना बनाउने योजना बनाएका छौं । त्यही योजना अनुसार एयरपोर्ट हुने तर जहाज सञ्चालन नहुने , धारा जडान हुने तर पानी नआउने समस्या अन्त्य हुने छ । साथै हामीले प्रत्येक घरघरमा धारा जडान गर्ने छौं । हामीले खेत बाँझो राख्ने अबस्थाको अन्त्य गर्ने छौं, त्यसका लागि सिंचाईको उपलब्ध गराउने योजना बनाएका छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ब्यबस्थित तथा स्तरबृद्धि गर्ने छौं । यहाँका पर्यटकीय स्थल सुन्दर र आर्कषण बनाउने, हरियाली तुलसीपुर ,स्वच्छ तुलसीपुर ब्यापाक बनाउने योजना बनाएका छौं । हाम्रो प्रमुख केन्द्र बिन्दु भनेको तुलसीपुर उपमहानगरबासीको आम्दानीको स्रोत बढाउनु पनि रहेको छ । नगरको बन वातावरण र सौन्दर्यलाई जोगाउन पहल थाल्ने छौं । उपमहानगर भित्रका गरिब, बिपन्न , पछाडि परेका समुदायलाई उत्थान गर्न छौं । तुलसीपुरमा भित्रने लगानिलाई मध्यनजर गरेर सुरक्षाको दृष्टि र श्रमीकहरुको श्रमलाई सम्मान गर्दै समाबेसी बिकासका आधारमा हामी अघी बढ्ने छौं । हामी ५ बर्ष भित्रमा हरेक वडामा सडक कालोपत्र, सिंचाई, खानेपानीका लागि डिपबोरिङको ब्यबस्था गर्ने छौं । टरिगाउ एयरपोर्ट तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने छौं । पर्यटनको बिकास गर्ने छौं, त्यसका लागि यस क्षेत्रमा सुबिधायुक्त होटेल, रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याउने छौं । बबई नदिमा सम्भाब्यता अध्ययन गरि ¥याफ्टिङ, छिल्लिकोट, मुलकोट, कपुरकोट, स्वीकोटलगायतका उत्तरी पहाडमा भ्युटावर निर्माण गर्ने , हरेक वडामा ताल, हरेक गाउमा एउटा खेल मैदानलगातका बिकासहरु निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं । आधारभुत रुपमा पुरा गर्छौ ।
त्यसको लागि संघ,प्रदेश, स्थानीय तह, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थासंग सहकार्य गरी अघि बढने छौं । पर्यटनको लागि तुलसीपुर घुम्ना जाऔ है भन्ने वातावरण शिर्जन गर्ने छौं । हामीले ५ बर्षमा ५ वटा महानगर तथा उपमहानगर संग मितिरी साईनो जोड्ने छौं । जसले गर्दा हामीले बाह्य पर्यटकहरु भित्र्याउन सहज हुने छ । हाम्रो पार्टीको सरकारले सामाजीक सरक्षा भत्ता बृद्धि गरेको थियो, अब हामीले जित्यौ भने स्थानीय स्तरमा सुत्केरी महिलाका लागि सुत्केरी भत्तापनि उपलब्ध बनाउने योजना बनाएका छौं ।
अहिले तुलसीपुरको समस्याको रुपमा रहेका र तपाईले मेयरमा जिति सकेपछि तत्कालै शुरु गर्ने कार्य के के हुनेछन् ?
म मेयरमा बिजयी भएसंगै शिक्षा, स्वास्थ्य , सिंचाई, कृषि सडक, रोजगारी , खेलकुदको सवालमा हामिले तत्काले काम शुरु गर्ने छौं । हाम्रो प्रमुख प्राथामिकता तुलसीपुरको बजारीकरणलाई बिस्तार गर्ने, यहाँ उत्पादन हुने फोहरलाई मोहरमा परिणत गर्ने, तुलसीपुर सरसफाई अभियानलाई अगाडि बढाउने, अहिले अस्तब्यस्त बनेको तुलसीपुर बसपार्कलाई आधुनिक बसपार्क निर्माण गर्ने, सबै ठाउमा सडक सञ्जाल बिस्तार गर्ने, स्वास्थ्य उपचार सेवालाई सर्भशुलभ बनाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जनताको घरदैलोमा पु¥याउने, ईन्जिनेरिङ, होटेल ब्यबस्थापन, पयटन, कृषि , मानब स्थास्थ्यसंग सम्बन्धि कलेज स्थापन गर्ने, किसानहरुको आयस्तरमा बृद्धि गर्नुका साथै हरेक किसानहरुलाई सौलियत ऋणको पहँुचमा पु¥याउने , युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने बिभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पहिलो काम हुने छ ।
एमाले भित्रका बिवाद पटक पटक सार्बजनीक रुपमै बाहिर आएका थिए । त्यसले निर्बाचनमा त प्रभाव पार्दैन नी ?
नेकपा एमाले लोकतन्त्रमा बिश्वास गर्ने पार्टी हो । हामीले जनताको बहुदलीय जनबादको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्छौ । माक्र्सबाद लेनिन्बादका आाधारभुत सिद्धानतालाइ पालना गर्छौ । एमाले अनुसासित पार्टी पनि हो । एमाले भित्र निर्बाचन लगायत अन्य बिषयमा समस्या थिए । तर अहिले हाम्रो पार्टी भित्र कुनै समस्या छैन् । यस पटक हाम्रो पार्टीलाई हामीले एकता बद्ध बनाएका छौं र एकताबद्ध भएर निर्बाचनमा होमिएका छौं ।
त्यसो भए तुलसीपुरका मेयेरमा एमालेबाट चर्चामा आएका ब्यक्तिहरु संग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु भाको छ रु
हामी संगसंगै छौं । हिजो पनि संगसंगै थियो । अब भोलीका दिनमा पनि संगसंगै हुने छौं ।
अन्तममा केही छुटेको कुरा
तुलसीपुर उप महानगरपालिका भित्र रहेको नेपाल सस्कृत बिश्व बिद्यालय अहिले तालझुण्डी भएको छ । तालझुण्डीलाई हटाउन त्यहाँका हरेक सम्सया अन्त्य गर्न जरुरी छ । नेपाल संस्कृति बिश्व बिद्यालयलाई नेपालको मात्र नभई बिश्वको सस्कृति, पुर्बीय दर्षण, आयुर्वेद, योगाको अन्तरािष्ट्रय केन्द्र बिन्दुका रुपमा बिकास गर्ने छौं । बेलझुण्डीमा रहेको रहेको रंगशालालाई मापदण्डका आधारमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउने , खेलकुद महाबिद्यालयको अबधारणा अगाडि बढाउने, तुलसीपुरलाई शिक्षाको केन्द्र बिन्दु बनाउने योजना छ । साथै मेडिकल सिटिको बिकासका लागि यहाँका हस्पिटलको स्तरउन्नती गर्ने , बिशेषज्ञ सेवा दिने , आईसिय बेडको संख्या बढाउने, रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने, जेष्ट नागरीकको लागि जेष्ठ नागरीक हष्पिटल सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ ।
साभार राप्ती समाचार